Hamafiso ny fantsonao sy horonan-tsarinao amin'ny alàlan'ny fomba fanao tsara indrindra an'ny YouTube ho an'ny fitomboana organika faran'izay betsaka nefa tsy mividy doka! Izahay dia Google Certified amin'ny fitomboan'ny Channel YouTube ary fantatray izay ilaina hatao!
Hainay ny manao fampisehoana amin'ny YouTube!
Ireo manam-pahaizana momba anay voamarina ao amin'ny YouTube dia nanao YouTube SEO hatramin'ny taona 2011. Hainay ny tetika tsara indrindra sy mahomby izay manome valiny. Hodinihinay tanteraka ny fantsonao sy ny horonan-tsarinao, avy eo hanome anao torolàlana voafaritra tsara, antsipiriany ary mora harahina hanatsarana azy io ary hitombo avo kokoa amin'ny valin'ny fikarohana. Izany dia mitarika amin'ny fifamoivoizana avy amin'ireo mpijery izay manan-danja indrindra - ireo voajanahary.
Serivisy dia ahitana:
FAQ Review ny Channel YouTube
Azonao atao ve ny manome tombana amin'ny fantsona YouTube Channels tsy anglisy?
Azonao atao ve ny manome ireo serivisy ireo amin'ny fantsona YouTube tsy anglisy?
Mandra-pahoviana no handraisanao feo manombana ny fantsoko?
Ny horonantsary horaisinao aminay dia 45 + minitra ny halavany ary feno fahitana sarobidy ao amin'ny fantsonao YouTube.
Ahoana no ahafahan'ny lohateny, ny famaritana ary ny teny lakile / Hashtags mihamitombo manampy ny fitomboan'ny fantsoko?
Mampiaraka fomba fanao tsara indrindra sy fitaovana fikarohana premium izahay hanomezana anao Lohateny, Famaritana ary Teny lakile / Hashtags izay hanampy anao hanana laharana tsara kokoa, ho matihanina kokoa ary hampitombo ny tsindry-thru-rate (CTR) an'ny horonan-tsary.
Ianao ve mila ny alalàn'ny fidirana amin'ny fantsona YouTube?
Tsia, tsy mila mari-pahaizana momba ny fidirana izahay. Tsy miditra amin'ny fantsonao YouTube izahay. Fa kosa, manome anao antontan-taratasy amin'ny antsipiriany sy mora takarina izahay mba hahafahanao mampihatra ireo soso-kevitra manokana. Mora ary tianao ny mampihatra ny fanovana anao, satria hanampy anao hianatra sy hitombo amin'ny maha YouTuber anao io.
Eny ary tsia. Andao hanazava… Ny tenindrazantsika dia anglisy. Koa satria te hanome anao serivisy faran'izay tsara faran'izay tsara azo atao izahay, indrisy fa tsy afaka manome anao ny hevitray momba ny SEO amin'ny fiteny hafa.
Na izany aza… afaka mampita ny serivisinay aminao amin'ny teny anglisy izahay, avy eo afaka mampiasa Google Translate mba hanovana azy amin'ny fiteninao. Google Translate dia manao asa tsara amin'ny fandikan-teny, amin'izay ianao dia afaka mandray soa betsaka amin'ireo serivisy ireo, na dia amin'ny fiteny hafa aza ny fantsonao.
Mandra-pahoviana ny fanodinana iray manontolo?
Afaka miovaova arakaraka ny tanjonao izany. Amin'ny ankapobeny, aorian'ny fampiharana ny soso-kevitray, dia hahita fitomboana miadana ianao mandritra ny volana voalohany satria tsy manavao ny vokatra eo noho eo ny YouTube. Avy eo, mandritra ny volana maromaro, ny fiakarana dia haka ary hanohy haka isam-bolana. Tahaka ny kamio fitaterana… hanomboka miadana ny valiny, fa raha vao miakatra ny momentum dia handeha haingana ianao! Ireo valiny ireo dia mieritreritra fa nampihatra ny sosokevitra narosonay ianao ary mandefa atiny kalitao ihany koa. Na inona na inona kalitaon'ny atiny, hanampy anay ny serivisinay, fa raha avo lenta kokoa ny atiny, dia tsara kokoa ny valiny ho hitanao aorian'ny fampiharana ny soso-kevitray.
FAQ Famolavolana Grafika YouTube
Ahoana no ahafahan'ny fantsona haavo mihamitombo sy hazan-tsarimihetsika manampy ny fitomboan'ny fantsoko?
Ny fahatsapana voalohany dia tena manandanja tokoa eo amin'ny tontolon'ny Internet. Raha misy mitsidika ny fantsonao ary tsy mahita sora-baventy na sary kely mahaliana izay mahasarika ny sain'izy ireo dia hanery haingana ny bokotra aoriana izy ireo. Ny serivisy famolavolana matihanina dia hametraka tsiky eo amin'ny tavanao rehefa mampakatra ny sary ianao ary mahita ny "fivarotana" matihanina nohatsarainao.
Hatraiza ny maha-zava-dehibe ny famolavolana Thumbnails Video Professional?
Raha mijery ianao, dia ho hitanao fa ny YouTubers lehibe rehetra dia mampiasa sary ankavanan'ny horonan-tsary mba hampipoitra ny lahatsariny sy hahazoana tsindry bebe kokoa. Ny sary thumbnails misy kalitao sy fanao dia mampiavaka ny horonan-tsarinao amin'ny horonan-tsary izay mety manana fomba fijery bebe kokoa na malaza kokoa noho ny anao. Na dia ambany noho ny valin'ny fikarohana aza ny horonan-tsary misy anao dia hisarika ny sain'izy ireo ny sary kely manokana ary hamporisika azy ireo hitsidika ny horonan-tsarinao.
Ny thumbnails manokana dia manampy amin'ny fanatsarana ny laharam-pikarohanao YouTube sy Google, ka miteraka fifamoivoizana organika bebe kokoa ho anao.
Tsia, tsy mila mari-pahaizana momba ny fidirana izahay. Tsy miditra amin'ny fantsonao YouTube izahay. Fa kosa, manome anao izahay ny sary mba hahafahanao mampakatra azy ireo ihany. Mora ary ho tianao ny hanao ny fanovana, satria hanampy anao hianatra sy hitombo amin'ny maha YouTuber anao io.
Eny! Afaka mamolavola sary ho an'ny karazana fantsona YouTube izahay, na inona na inona sokajy misy ny atiny.
Ahoana raha tsy tiako ilay volavola, na mila fanovana aho?
Mifandraisa aminay tsotra izao, azavao izay tianao hovaina dia hataonay ny fanitsiana! Amin'ny farany, tianay ny hitiavanao ireo sary azonao sy apetrakao ao amin'ny fantsonao YouTube.
Afaka miovaova arakaraka ny tanjonao izany. Amin'ny ankapobeny, aorian'ny fampiharana ny sary ataonay dia hahita fitomboana miadana ianao mandritra ny volana voalohany satria tsy manavao ny vokatra eo noho eo ny YouTube. Avy eo, mandritra ny volana maromaro, ny fiakarana dia haka ary hanohy haka isam-bolana. Tahaka ny kamio fitaterana… hanomboka miadana ny valiny, fa raha vao miakatra ny momentum dia handeha haingana ianao! Ireo valiny ireo dia mieritreritra fa nampihatra ny sary izahay ary mandefa atiny kalitao ihany koa ianao. Na inona na inona kalitaon'ny atiny, hanampy anay ny serivisinay, fa raha avo lenta kokoa ny atiny, dia tsara kokoa ny valiny ho hitanao aorian'ny fampiharana ny sary.